imishini yesimanje izimoto - anhlobonhlobo amagajethi ezingenziwanga kuphela ejabulela ezihlukahlukene, kodwa futhi izinga. Ethandwa kakhulu ehlangana kudivayisi premium Neoline X-COP 9500. Izibuyekezo lokhu okuhle DVR, ngenxa inhlanganisela ephelele umtshina futhi rekhoda imisebenzi. abasebenzisi Russian kusho izakhamuzi ngazwi linye bathi phambi kwethu ehloniphekile imoto igajethi usebenza emihle ensimini ka-Russia.
Kuyinto ephawulekayo, kodwa lapho umenzi radar kwesabelomali Neoline (value isilinganiso onobuhle isesikhathini ruble 10 000), ememezela ukusungulwa kwe-idivayisi hybrid, izazi wayisa izindaba abakwethembi. Nokho, ukuhlolwa kwabonisa ukuthi: ngaphansi kwalesi brand kukhona izinga imitshina kanye abalobi e insimbi eyodwa azinake ikhasimende ezingezwakali kakhulu.
Njengoba Bathi bona abakhiqizi, ukukhulula hybrid umtshina yesimanje babehlelile isikhathi eside Neoline. Akumangazi, ngoba imikhiqizo ye-brand umise ngokwaso njengoba onokwethenjelwa esitebeleni msebenzi. I Onjiniyela wanquma nje ukuhlanganisa amayunithi izindlu ezimbili, okuyinto uzosebenza bebodwa. Banquma ukuthi isofthiwe platform eyodwa, uhlelo lokulawula kanye esibonakalayo kuyoba umehluko oyinhloko idivayisi Neoline X-COP 9500. Izimpendulo ngaye ngokuvamile ukhombe izinga okusezingeni eliphezulu kanye nokwethulwa ubuchwepheshe yesimanje ezihlangabezana nezidingo abasebenzisi.
Yini ejabulisa Neoline?
Vele uqaphele ukuthi Neoline wadala ngowokuqala eliphezulu radar umtshina hybrid DVR for the amakhasimende olindele kunazo. Izici zayo ezivelele kukhona imfanelo elandelayo.
Ukutholakala GLONASS + GPS. navigation systems ezimbili ukunikeza inembe kunazo isevisi yendawo imoto, okuyinto ebalulekile ekunqumeni izixhumanisi radar amaphoyisa.
Excellent izinga vidiyo. It kuqinisekiswa lens 6, ngaleyo ndlela eqinisekisa amandla esiphezulu phakathi lolu hlobo amadivaysi.
Informativeness. Lonke ulwazi ezibalulekile umsebenzisi uboniswa kwisibonisi olulodwa.
Thinta Control. Radar zingalawulwa ngokushesha futhi kalula esebenzisa touch screen esikhulu ngaphandle kokuphazamiseka ngenkathi ushayela, izinkinobho kuthiwa sicindezelwe.
design ergonomic. Idivayisi yakhelwe ukuze entabeni kwaba elula, ngenkathi ingabekwa egumbini umgibeli zalokhu esiphezulu.
traffic uhlelo lokulawula. It ikuvumela ukuba iqaphe isimo izimoto ngokuya mshini komgwaqo. Uma ngokungazelelwe imoto yakho ngeke uhambe ngalé imizila, uzozwa ibhiphu alamu, futhi ulwazi olwengeziwe kuzovezwa.
Ukuthola amaphoyisa radar. Lokhu ibangelwa khona amamojuli ezintathu - GLONASS, GPS, umsakazo mojuli.
Special X-COP imodi uyakwazi ezisebenza ngokuzenzakalelayo, ie imitshina zinqunywa kuncike ijubane emotweni. Ngakho, ngesivinini-40 km / h kutholwa ngu radar inkomba uphawu esibukweni ngesilinganiso esingamaphesenti 41 70 km / h uzobe esitshalweni 'Umuzi' imodi kanye ngesivinini ngenhla 71 km / umsebenzi h "ithrekhi" Imodi.
inkampani Neoline inikeza imishini yezimoto ukuthi akuyona esifana nezinye brand. Ngokwesibonelo, umuntu angabona ngokushesha ukugcina izindlu ukuma lwalugobile, elivumela isikhundla ukhululekile kunazo idivayisi ngaphakathi gumbi. Ngaphezu kwalokho, ukuba uyiphathe silula, ngoba inombolo ubuncane okhiye kanye nalo lonke ulwazi oludingekile luzonikelwa umshayeli ngokushesha esibukweni. izinga kwangaphandle - lena into yokuqala ukuthi udonsa ukunakwa abasebenzisi Neoline X-COP 9500. Impendulo evela kulabo kakade wajabulela umbhalisi ezinjalo, omuhle kuphela, ukuthi kuchazwe kalula okunamathiselwe - ukuncela inkomishi noma tape ekhethekile.
Yiqiniso, abathengi abaningi ukulalelisisa design sangaphandle imishini yezimoto, kodwa ungakhohlwa mayelana nezici lobuchwepheshe. Le modeli kulesi sici siyamangalisa. Okokuqala, yona ifakwe yokukhanya kakhulu, ezahlukene sensitivity high. Lokhu kufezwa sibonga processor zayo ezinamandla Ambarella A7 nge indlela ekhethekile optical Aptina 0330 eyisithupha ingilazi lens.
Okwesibili, Neoline X-COP 9500 rekhoda amarekhodi isiqophi in high futhi isixazululo nge isithombe esicacile ngisho ngaphansi nzima izimo zezulu. Ngenxa nokugcinwa omuhle kakhulu focus iyunithi ubhekana nalokhu kudubula, ngisho noma ingilazi ingcolile. Kulesi fixed konke kwenzeka ngokushesha futhi ngesikhathi bands eduze.
Ilayisense yomkhiqizo omningi osemqoka - khona!
Ngokwemvelo, njenganoma iyiphi enye eliphezulu rekhoda, lokhu ifakwe inzwa motion kanye G-inzwa. Lokhu kuvumela idivayisi ngokuzenzakalela kuphela ukurekhoda, awuvikele bezihlikihla, kodwa futhi ukuba bagcine ngisho endaweni epaka izimoto. Ukuqopha icushiwe ngokuzenzakalela noma kunini Ukuthutha ukuthi kuzoqoshwa nge inzwa. Registrars babe Neoline X-COP 9.500 ukubuyekezwa kanye awamahle, okuyinto kubangelwa eliphezulu kakhulu ukuzwela ukushaqeka inzwa. Okusho ukuthi, uma ushiya ukubaluleka iyafana isethwe ngokuzenzakalelayo, uzoqhubeka cishe njalo irekhodi. Nokho, ukuthi le nkinga lula ukulungisa - kubalulekile ukuthi lushintshe izilungiselelo ukuzwela.
Registrar noma umtshina?
Ngokuvamile, imodeli hybrid avame kuholele Izibuyekezo ezingezinhle. Kukholakala ukuthi ube nobunzima ekubhekaneni ngokuphumelelayo nemisebenzi idivayisi. Kodwa radar umtshina Neoline X-COP 9500 kulokhu kubonisa ukusebenza kakhulu.
ngokuzethemba Yena okubhekana nanoma isiphi radar amaphoyisa - efana isandla neselula, kuhlanganise nalabo "umcibisholo".
Ukuzinza bunikezwa operation hybrid futhi ukutholakala GPS-module.
Ngaphansi kwesithombe senqaba idivayisi eziningi idatha amaphoyisa radar, okuyinto, uma kunesidingo, ungakwazi ukubuyekeza.
Enye omuhle izinga umbhalisi Neoline X-COP 9500 - firmware uhlale etholakala ku-intanethi, futhi ikuvumela ukuba ngcono kudivayisi, nokwenza ukuthi zisebenze kangcono nokuningi enokwethenjelwa.
Radar Detector Neoline brand amehlo kanye nezinga imishini. Isibonelo, imiyalo maqondana ifakwe ezihlakaniphile alamu kwimodi, lapho uzwela incike ijubane lokuya umshini.
DVR imoto yalesi brand kuyahluka ukubukeka laconic, kungekho indawo izinkinobho engadingekile. Nale Idivayisi yokulawula kulula futhi elula - esebenzisa esikhulu touch screen ne izithonjana ezinkulu futhi endaweni ekahle. Lapho ushayela imoto esikrinini iqoqa ulwazi kusuka kumadivayisi ezimbili, ngakho umshayeli kuyodingeka isithombe esiphelele okwenzekayo. Isikrini iqoqa ulwazi mayelana:
isikhathi samanje nesivinini;
Ngaphezu kwalokho, isikrini izoveza ulwazi mayelana ibanga radar kanye nezinga isiginali, esiphezulu kuvunyelwa isivinini kanye ngesivinini esingamakhilomitha izimoto. Inkinobho ekhethekile + GPS ikuvumela ukwengeza radar amaphoyisa e idivayisi inkumbulo nge okukodwa nje.
Amalungu waphawula ukuthi isikrini elikhanyayo, ngakho-ke konke kungabonakala ngokucacile ngisho ekukhanyeni okunamandla. Kulokhu, ungakwazi ngaso sonke isikhathi nibeka imodi iskrini ngokuzenzakalela - ngeke likhale ngesikhathi esithile esinikeziwe, okuyinto ziwusizo ngokukhethekile lapho ushayela ebusuku.
DVR imoto Neoline, Umsebenzisi abathengi ikhombisa isilinganiso ukurekhoda izinga. Uma ngesikhathi sasemini, ungakwazi ukunquma inani amarekhodi ku ibanga abafika kwabangu-10 metres, izinga eliphelele ebusuku - 7 amamitha. Ukubheka engela - degree angaba ngu-100, okuyinto engcono kakhulu kunaleyo ngisho onobuhle ezibizayo. Umkhawulo ukuqoshwa isixazululo 1920 × 1080, inhlolovo kwenziwa 30 ngesekhondi, okuyinto ejwayelekile amadivayisi zamanje.
Isisindo kanye yasibamba
DVR Neoline X-COP 9500 akakwazi ngokuthi amancane icwecwe, kodwa empeleni phezu ingilazi sekuyahwalala imperceptible. Ngenxa ukubukeka engavamile - isikwele, lapho inamathelisiwe thwi kanye nendawo iyunithi ezimbili zebhizinisi, kufanele ucabangele indawo kudivayisi emotweni. Kunoma yikuphi, lokhu isixazululo engabizi uma ucabangela ukuthi singakanani isikhala esiyoba radar kanye umbhalisi ngokwehlukile.
abathengi abaningi bathi umklamo wokuqala idivayisi ibonakala ungakhululekile futhi kudida ngenxa yokuntuleka izinkinobho. Kodwa ukuphathwa kwaba Sibonga okulula nantathu intshi nokuboniswa ukukhanya okwanele. Futhi kule nqubo ye usebenzisa umbhalisi akazange kuphakama awunankinga umsebenzi wakhe. Kuyaqapheleka futhi ukuthi quality Yakha enye engcono, ngoba uma uchofoza umzimba idivayisi creaked.
Kalula ngokuya Neoline X-COP iziqobosho 9500 Ukufundiswa uthi radar ingalungiswa ngezindlela ezimbili - phezu inkomishi ukuncela noma isitikha. abathengi abaningi bakhetha indlela yokuqala njengendlela kunokwethenjelwa futhi kulula ukufaka. Kulokhu, kokubili ongakhetha vumela obandayo iyunithi ukuze ujike endleleni efanele futhi ayikhiphe ebusuku.
Neoline DVR, ungakwazi ukumisa elula kakhulu umsebenzisi ngamunye. Amasethingi aphakanyisiwe ukulungisa ukugqama kanye nozwela inzwa ngenkathi ushayela futhi yokupaka, isikrini ukuqondanisa , nesikhathi ukuvumelanisa GPS-module. Hhayi ngaphandle imisebenzi ejwayelekile njengoba ushintsho imvume isibonisi Damping noma ukuqoshwa komsindo. Kukhona obhalisa nebhethri, kodwa ithangi encane, ngakho akuvamile esetshenziswa. Izikhathi yimbi abasebenzisi uthi buthule futhi ukurekhoda ividiyo, nakuba ihlanzekile.
Operation Easy - esinye isici esiphawula leli imodeli brand Neoline X-COP 9500. Sibutsetelo onobuhle ikuvumela ukwakha isithombe esiphelele ke. Ngakho, wonke umsebenzi wenziwa kwimodi okuzenzakalelayo, ukuqopha uzoqala ngokushesha ngemva umshini. Yonke imininingwane egcinwe kumemori khadi at efanayo ukulawula isikhathi mibhalo lula.
Uma ufuna DVR premium inothi Neoline X-COP 9500. intengo yaso ngokwesilinganiso cishe 20 000 ruble, kodwa okuningi okunjalo imali uzothola kudivayisi umnyuziki ehlanganisa imisebenzi rekhoda ividiyo futhi radar. Akukhona ukuthi kumane kuqondane ukuthi imishini imoto yaziwa njengenye omunye nzalo best imishini yalolu hlobo ngokuvamile. Interface kokubili amadivaysi kuphela, kuyilapho yagxila lonke ulwazi oluyokwenza umshayeli ukuba baqaphe isimo sezimoto. Umsebenzi radar rekhoda futhi wenza okukhulu, okwembula zonke amaphoyisa umile futhi radars ephathekayo.
Ngakho, abashayeli ongeke onga imali yokuthenga imishini izinga, njengawo Neoline X-COP 9500. intengo yaso okusezingeni eliphezulu, kodwa futhi kuyazuzisa izinga okuhle kanye operation esitebeleni. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi izothatha analogue eside kakhulu futhi ezishibhile kangcono.
Uma sihlaziya imibono sha abathengi igajethi, ungakwazi ukubonisa izici ezilandelayo omuhle.
isibonisi elula futhi ecacile ne interface yomsebenzisi-friendly ngawo ukuqonda ngisho umshayeli ongenalwazi. izithonjana ezinkulu ukhululekile, ngakho umshayeli ngeke ukuphathwa ukuphazanyiswa ngenkathi ushayela.
Imodeli muhle kakhulu ngokuya ukuklanywa nokwakhiwa.
Intambo Long ikuvumela lokubeka idivaysi induduzo esiphezulu kule ingaphakathi imoto.
Cishe zonke amaphoyisa radars zinqunywa DVR.
Ukukhweza Simple futhi kulula ivumela esiphezulu isikhundla ergonomic ngaphakathi emotweni unit akuthathi isikhala kakhulu.
Ngokuqondene nebubi, kwakungekhona ngaphandle kwabo. Okokuqala, abathengi bathi lapho ukugibela inkomishi ukuncela akukwazi ukuqinisekiswa - e kunoma yimuphi umgwaqo anolaka ulushukuze. Nokho, lokhu akuphazamisi izinga ukuqopha, okuyinto ebaluleke kakhulu. Okwesibili, akukho-USB nezimbobo - baphonse ulwazi kusukela kudivayisi kuya PC, kubalulekile ukukhipha imemori khadi. Okwesithathu, amanani aphezulu. Nokho, lapho ucabangela kahle futhi enokwethenjelwa kanjani usebenza umabhalana, izindleko akubonakali ukuthi enkulu.
Ngakho, uma udinga ukusebenzisa imishini yezimoto ozinzile futhi sici-ecebile, imikhiqizo brand Neoline ngokunembile uzoba yiyo. Uma ezichazwe kulesi sihloko, imodeli akuyona ekufanele ngentengo ukuthi ezibanzi imodeli ububanzi futhi uyohlale ukuthola kukho isabelomali. Uzoba bayakwazisa ukwehluka izici namakhono ebonakalisa DVR.
Siyini leso simiso zokusebenza yokuhlukanisa izinhlelo
I-Smartphone Explay Tornado: ukubuyekezwa nokubuyekezwa
Usuku City Petersburg
Izinwele Nobuhle ekhaya
Ngokubabazekayo Ihhotela futhi SPA 4 * (Zakynthos): izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa